ခက်မာ: စီးဆင်းနေသော မိုးတိမ်များ 1. 2.
ချမ်းချမ်းစီးစီး ညလည်ခေါင်ကြီးတွင် အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစား၍မရသောအခါ ကြည်အေးကဗျာကိုသတိရမိသော်
လည်း ရွတ်ဆိုဖို့ စိတ်မပါတော့ပြန်။ ပြတင်းပေါက်မှဟိုဟိုဒီဒီငေးကြည့်မိပြန်တော့လည်း မြင်သမျှက နှင်းများ
ဖြင့်ဖွေးဖွေးဖြူနေလေသည်မို့အချမ်းပိုရသည့်အပြင် အဖြူအမည်းပန်းချီကားနှင့်တူသောဆောင်းညက ဘ၀ အလွမ်းကိုပင် အားပေးပိုကဲစေပြန်သည်။ ဒီတော့အိပ်ရာဆီပြန်လှည့်၊ထုံးစံအတိုင်းစောင်ထူထူအောက်မှနေ၍
ဂြိုလ်ကမ္ဘာနေရာအနှံ့စိတ်ဖြင့်လည်ပတ်လွန်းထိုးဖို့ ကိုသာရွေးချယ်ရတော့သည်။
အိပ်ရာနှင့်ကျောထိမိလိုက်တာနှင့် ထိုအသံကိုကြားလိုက်ရတာဖြစ်သည်။ ရေစီးသံ။ ခုနပဲ ပြတင်းပေါက်မှအကြည့်ခွာခဲ့တာမို့ အပြင်မှာမိုးရွာနေတာလည်းမဖြစ်နိုင်။ အိမ်ခန်းထဲမှာလည်းမှောက်ကျယို
စီးစရာ ဘာမှမရှိတာသေချာသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကိုတွက်စစ်ပြီးကာမှထိုရေစီးသံကို ကျမခန္ဒာကိုယ်ထဲမှ ကြားနေရတာပဲဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ရေသံက စမ်းရေစီးသံလိုလည်းမငြိမ့်ညောင်းပါ။ ပင်လယ်လောက်လည်းလှိုင်းမထန်။ ရေတံခွန် တစ်ခုလိုလည်းမာန်ဟုန်မပြင်း။ အရှိန်တခုဖြင့် မှန်မှန်စီးဆင်းနေမှန်းသိသာရုံ။ တစ်ခါတရံတွေ မှာတော့ ရေစီး နှင့် ၀ဲကတော့ဆုံတွေ့ သလို ရေစီးသံက အနည်းငယ်ထူးခြားမြန်ဆန်သည်။ တစ်ခါတရံကျ ပြန်တော့ တစုံတစ် ခုက ကန့် လန့် ဖြတ်လို့ ကြံ့ကြံ့ခံတားမြစ်ထားရာကို ဖြတ်စီးရသည့်ရေစီးလို ကျားကုတ် ကျားခဲ ဟောဟဲသံ တွေပေါ်နေသည်။ ဒါဟာကျမကြီးပြင်းခဲ့ရာ အိမ်ကလေးဘေးကချောင်းထဲမှာ မိုးရာသီ စီးတဲ့ရေစီးသံပဲဟု သတိထားမိချိန်မှာတော့ ကျမကခံစားနေကျ အအိပ်ပျက်ည၏ဒုက္ခကိုမေ့လျော့စပြုပြီ။
မြစ်၏လက်တက်ချောင်းကလေးမို့မြစ်ပြင်ကျယ်နှင့်ဆုံရာမှာတော့ နည်းနည်းမာန်ဟုန်ပြင်း ချင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ တရဟောစီးဝင်လာသော တစ်နယ်သားမြစ်ရေတွေကို ကိုယ့်ပိုင်နက်ထဲ စီးဆင်းခွင့်ပေးဖို့ ရာ မကျေနပ်ငြူစူချင်သော ချောင်းလက်တက်အပျိုစင်ကလေးက အားမတန်လို့ မာန် လျော့ ခွင့်ပြုလိုက်ရပေမယ့် နှုတ်ခမ်းစူမျက်စောင်းထိုးဟန် မြင်ကွင်းက မသိမ်မွေ့ ။ ခြေဆောင့်ကျောခိုင်းသွားဟန်
ရေစီးသံကလည်းမငြင်သာ။ ဒါပေမယ့်စကားချိုသောတစ်နယ်သားက သူ့ ရေလှိုင်းနှင့်ကမ်းစပ်ကို စည်းချက် ညီညီရိုက်ခတ်စေ၍ ဂီတသံဖန်တီးချော့မြူလေတော့ ချောင်းကလေးမစွာတေးက မျက်စောင်းဝင့်ထားဆဲ
ပေမယ့် နှုတ်ဖျားမှာအပြုံးတို့ တွဲခိုစပြုပြီ။ ထို့ အပြင်တစ်နယ်သားမြစ်ရေစီးကသယ်ဆောင်ခဲ့ပေးသော ၀တ္တု
ပစ္စည်းတွေက ချောင်းမလေး၏မိတ်ဆွေလူသားများအတွက် အသုံးဝင်အဖိုးတန်နေလေတော့ လူသားများ ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်စကားပြောသည့်နှယ် ရေစီးသံကိုမှန်မှန်ပြု၍ ဂီတသဖွယ်ဖန်တီးလေသည်။
တစ်နယ်သားသယ်ဆောင်လာပေးသည့်အထဲမှာ ကိုင်းဖျားကိုင်းခြောက်ကလေးများအပါ အ၀င် သစ်ပင်အမျိုးအစားစုံ၏ ပင်စည်အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ အမြစ်ဆုံတွေပါ ပါသည်။ ကျမအပါအ၀င် ချောင်းမ ကလေး၏မိတ်ဆွေလူသားများက လောင်စာအဖြစ် သစ်ပင်မှရသောထင်းကိုသာသုံးကြရသဖြင့် မြစ်ရေစီးက
သယ်ဆောင်ခဲ့ပေးသော ထိုထင်းစ၊ ထင်းခြောက်နှင့် သစ်ပင်၏အပိုင်းအစများက အဖိုးတန်သောလက် ဆောင်များပမာပင်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ထက်ရေစီးပိုပြင်းသော မိုးတွင်းချောင်းရေပြင်ထဲတွင် ထင်းဆယ်ထွက် ကြသောလှေတွေကို တပျော်တပါးမြင်တွေ့ ကြရသည်။ တချို့ လှေတွေပေါ်မှာ ကလေးတွေချည်း။ တချို့ က
တော့ အမေနှင့်သား။ အဖေနှင့်သမီး။ တချို့ ကတော့လှေကြီးကြီးနှင့် လူကြီးတွေချည်းထွက်လာ၍ စီးပွားရေး တစ်ခုလိုထင်းလိုက်ဆယ်ကြသည်။ လူအင်အားကောင်းလျှင်ကောင်းသလို မိုးတွင်းမှာဆယ်ထားသောထင်း က ထိုမိသားစု တစ်နှစ်စာဖူလုံတာမျိုးရှိသလို အပိုအလျှံထုတ်ရောင်းရတာမျိုးတောင်ရှိသည်။
ဘယ်အရပ်ဘယ်ဒေသမှာပေါက်မှန်း ဘယ်လိုပုံစံနှင့်ပေါက်မှန်းသီးမှန်းမသိပဲ မြစ်ရေစီးနှင့်မျောလာသော ဂုံညင်းသီးများပင်။ အညိုရင့်ရောင်အခွံမာမာ ဂုံညင်းသီးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေကို ထွေပစ်တမ်းကစားရာမှာသုံးဖို့ 
ဒိုးလုပ်ကြသည်။ ပိန်ပိန်လိန်လိန် မညီမညာဂုံညင်းသီးတွေကိုလည်းကလေးများက အလွတ်မပေးပါ။ ရသမျှ ဆယ်၊ လှေဝမ်းထဲထည့်သယ်ပြီးလူကြီးတွေကိုအပ်ကြသည်။ လုကြီးတွေက အခွံမာမာကိုထုခွဲ၊ အထဲက အနံ့ပြင်းပြင်းအဆံမာမာကိုပါးပါးလှီး၊ မည်းညစ်ညစ်မုန့် လုပ်ထန်းလျှက်တွေနှင့် ယိုထိုးကြသည်။ ဘာကောင်းမှန်း ဘယ်သူမှရေရေရာရာမပြောနိုင်ကြသော်လည်း မိန်းကလေးတွေအတွက်ကောင်းတယ်ဟုဆိုကာ အိမ်လာ သမျှမိန်းကလေးတွေကို ဂုံညင်းယိုကြွေးကြသည်။ နီးစပ်ရာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေထဲက မိန်းမများများရှိသော
ကျမတို့ တတွေ ဇာတိမြေကိုစွန့် ခွာပြီး မြို့ တော်မှာအခြေချကြတော့ နွေနေ့ လည်ခင်းတွေမှာ
အိမ်ရှေ့ လမ်းမတလျှောက် ဗန်းကလေးနှင့်ရွက်ရောင်းသော ယိုစုံသည်ထံမှ ဂုံညင်းယိုကိုဝယ်စားမိကြပြန် သည်။အဲဒီအထိလည်းဘာကောင်းမှန်းမသိသေးပဲ မိန်းမတွေအတွက်ကောင်းတယ်ဟူသော လူကြီးတွေပြော စကားအတိုင်း ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်စားခဲ့ကြသော ဂုံညင်းယိုနှင့်၊ ဂုံညင်းယိုထိုးဖို့ဂုံညင်းသီးတွေကိုလှေနှင့် လိုက် ဆယ်ကြတာကိုလွမ်းတာနှင့်ပင် မြိန်ရည်ယှက်ရည် စားဖြစ်ကြပြန်သည်။ တကယ်တော့လည်း ကြည်နူးပီတိ
မိုးတွင်းမြစ်ရေစီးသယ်ဆောင်လာခဲ့သမျှထဲမှ ဆယ်ခဲ့ကြသည့် နောက်ထပ်အရာတစ်ခုက
ရေနံစိမ်းခဲတွေဖြစ်သည်။ လက်မလက်သန်းအရွယ်မှ ပိဿာအရွယ်အထိ ရေနံချေးတုံးတွေက ထင်းတိုထင်းစ တွေ၊ ဂုံညင်းဒိုးတွေနှင့်အတူ ရေစီးမှာမျောပါလာကြသည်။ ရေနံစိမ်းတုံးတွေပတ်လည်ကရေပြင်မှာ အဆီဝေ့ ၀ိုင်းနေတတ်သည်မို့ ခပ်လှမ်းလှမးမှာကတည်းကမြင်သာသည်။ တစ်ခါတလေ ကျမတို့ ကလေးတွေက လှေ တစ်စင်းနှင့်ချောင်းထဲမှာ စုန်ဆန်ကာထင်းဆယ်ရင်း၊ ဂုံညင်းဆယ်ရင်းမောလျှင် ချောင်းရေပြင်ထဲ ထိုး ထွက် နေသော သစ်ပင်သစ်ကိုင်းတစ်ခုခုကို လှေနှင့်ချည်နှောင်၍ ခဏနားကြသည်။ ခြေနှင့်လက်တွေကခဏ
တဖြုတ်နားကြပေမယ့် မျက်လုံးတွေကတော့မနားကြပါ။ ရေစီးလာရာဖက်မျှော်ငေးရင်း ချောင်းရေပြင်မှာဆီ
ဝေ့နေတာအရင်မြင်သူက အဲဒါငါ့အတုံးဟုသေချာမမြင်ရသေးသော ရေနံတုံးကိုဦးရသေးသည်။
ကျမတို့ ရွာကလေးက ငါးရှာ ဖားရှာ တံငါသည်ရေလုပ်သားတွေများသည်မို့လူတော်တော် များများမှာလှေရှိသည်။ ထိုလှေများနှင့်ဆယ်ထားသော ရေနံချေးတုံးတွေကိုစုဆောင်းကာ နောက်တစ်နှစ်မိုး ကျကာနီးမှာ အိုးအဟောင်းတစ်လုံးနှင့် မီးတိုက်ကြတော့သည်။ ပျော်ကျလာသော ရေနံချေးအရည်တွေကိုရေ နံချေးဆယ်ခဲ့သောလှေများကို ပြန်သုတ်လိမ်း၍ လှေကိုတာရှည်ခံအောင် အသုံးချကြသည်။ တချို့ ကျတော့ လည်းကိုယ့်အိမ်သစ်သားနံရံတွေကို သုတ်ကြသည်။
ရေနံချေးသုတ်ထားသော သစ်သားနံရံတွေက မိုးဒါဏ်ပိုခံနိုင်သည်။ တချို့ ကအိမ်ကြမ်းခင်း
တွေကိုလည်း ရေနံချေးသုတ်ကြသည်။ ကြမ်းခင်းတွေကိုတော့ နံရံပြင်တွေလို ရေနံနှင့်ရွှဲနစ်နေအောင်သုတ် လိမ်းကြတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ရေစုပ်သော အ၀တ်စအဟောင်းလေးတစ်ဖက်ကို ရေနံချေးဆွတ်၊ ရေနံမစိုသော
တဖက်အ၀တ်စနှင့် ပြန်ဖိအုပ်ကိုင်ကာ ကြမ်းခင်းပြင်ပြားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ဖိတိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီလို လုပ်ပါများသော ကြမ်းခင်းပြင်က ရေနံနှင့်ဝပြီး၊ အ၀တ်စနှင့်ဖိတိုက်ခံရပါများပြီး ပြောင်ချောနေတော့သည်။
နွေညတွေဆို အဲဒီပြောင်ချောနေသော ကြမ်းခင်းပျဉ်ပေါ်မှာ ဖျာမခင်းပဲလူးလိမ့်ရင်း အဘွား
ပြောပြသောပုံပြင်တွေကို နားထောင်ရသည့်အရသာက ဘာနှင့်မှမတူ။ အဘွားမှာပြောစရာပုံပြင်တွေထပ်
ကုန်တော့ မြေးတစ်သိုက်က အဘွားထံမှကြားခဲ့ရသောပုံပြင်တွေကိုပဲ တလှည့်စီပြန်ပြောကြသည်။ တစ်ခါ တလေတော့ ဒွေးမယ်နော်နှင့်ရှင်မွှေ့ နွန်းမှားလိုမှား၊ သက်ကယ်ရိတ်သွားမည့်ရွှေယုန်ရွှေကြားက ယုန်နှင့် လိပ်အပြေး ပြိုင်ပွဲကွင်းထဲရောက်လိုရောက်ပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့လည်း စောစောကခေါခေါဟောက်နေသည့် အဘွားကဘယ်အချိန်ပြန်နိုးနေမှန်းမသိဘဲ တခစ်ခစ်ရယ်ကာ ပုံပြင်ကိုပြင်ပေးပြန်သည်။
အေးမြနေသော သစ်သားကြမ်းခင်းပေါ်တွင်လူးလှိမ့်ရင်း အိမ်ရှေ့ တည့်တည့်ကအုန်းပင် ခွကြား မှာငြိနေသည့်ဖိုးလမင်းကိုမြင်လျှင် ' အဘွား...ဟိုမှာ လမင်းကြီး လှလိုက်တာ' ဆိုသောစကားကို လသာည တိုင်းပြောမိသည်။ အဘွားကလည်း မပျက်မကွက်ခေါင်းထောင်ကြည့်ကာ 'အေး..ဟုတ်ပ၊ လှလိုက်တာ' တစ်လုံးမလွဲပြန်ပြောနေကြ။
ထိုစဉ်ကမသိခဲ့ပေမယ့် ထိုကြမ်းပြင်၏အေးစက်စက်အရသာ၊ ထိုကြမ်းပြင်မှာသုတ်လိမ်းဖို့ ရေနံ
ချေးအဆယ်ထွက်ရသောခရီးစဉ်တွေ၊ ထိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလူးလိမ့်ရင်းနားထောင်ခဲ့ရသောပုံပြင်တွေ၊ ရှူရှိုက် ခဲ့ရသော အဘွားကိုယ်မှ နံ့သာဖြူ၊ကရက်မက်နံ့တွေ၊ အဘွားခေါင်းထောင်ကြည့်ခဲ့သော လမင်း၏ရောင် ခြည်တွေက ကျမတို့ ဘ၀တွေကို ကိုယ်စီစိတ်ဝင်စားသည့် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘ၀တွေဆီရောက်အောင် မောင်း နှင်ပို့ ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်သည်။
အခုအချိန်မှာတော့ ကျမကျောအောက်မှာ စပရိန်မွေ့ ယာရှိသည်။ ကျမလှမ်းမြင်နေရသည့်
ပြတင်းပေါက်အပြင်မှာ တစ်ထွာလောက်ထူသော နှင်းလွှမ်းမြေပြင်ရှိသည်။ ကျမခြေချလိုက်လျှင် နုညံ့နွေး
ထွေးသောအထိအတွေ့ကိုပေးသည့် ကောဇောနုနုရှိသည်။ အခန်းနံရံမှာကပ်ထားသည့် အမွှေးရနံ့ထည့်ရာ
လျှပ်စစ်ပုလင်းမှ ကျမ,မသိသော ပန်းရနံ့ တမျိုးကို ထုတ်လွှတ်ပေးနေသည်။
ရေနံချေးဝနေသော ပြောင်လက်အေးစက်သည့် ကြမ်းပြင်မရှိပါ။
အုန်းပင်ခွကြားမှာ ယီးလေးခိုစီးနေသည့် ဖိုးလမင်း မရှိပါ။
အဘွား၏ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ မရှိပါ။
အဘွားကိုယ်မှ နံ့ သာဖြူကရမက်ရနံ့ တွေမရှိပါ။
ထို့ အတူ ....
ထိူစဉ်က ကျမတန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းမသိခဲ့သည့် နှစ်ခြိုက်သော အိပ်စက်ခြင်းလည်းမရှိတော့ပါ။